IKhabhinethi - Szczodre kufuphi neWrocław
Szczodre, Dolnośląskie, Poland
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguElżbieta
UElżbieta unezimvo eziyi-25 zezinye iindawo.
Indawo ezolileyo, enomtsalane, engaphantsi kweekhilomitha ezi-3 ukusuka kwi-Wrocław Motorway Bypass, iikhilomitha ezi-5 ukusuka kwimida yesixeko kunye neekhilomitha ezili-15 ukusuka kwimarike yaseWrocław, iyakumema ukuba uthathe ikhefu kubuphithiphithi besixeko. Indawo eluhlaza, ihlathi kunye namachibi aya kunika ithuba lokuchitha ixesha ngaphandle. Kukho ivenkile yegrosari ekufutshane, ipaki entle ehlaziyiweyo ekumema ukuba uhambe, ukubaleka kunye nokukhwela ibhayisekile. Ukubanakho ukuqesha iibhayisekile. Ndiyakumemela kwidolophu yaseSzczodre, ndinikezela ngendawo yokuhlala kwiimeko ezitofotofo.
Indawo ezolileyo, enomtsalane, engaphantsi kweekhilomitha ezi-3 ukusuka kwi-Wrocław Motorway Bypass, iikhilomitha ezi-5 ukusuka kwimida yesixeko kunye neekhilomitha ezili-15 ukusuka kwimakethi yaseWrocław, ikumema ukuba uthathe ikhefu kukuphithizela, uthathe umoya omtsha kwaye usondele indalo. Indawo eluhlaza, ihlathi kunye namachibi aya kunika ithuba lokuchitha ixesha ngaphandle. Ifulethi kumgangatho ophantsi wendlu kunye nomnyango owahlukileyo, ongabopheleliyo.
Ummandla wonke ulungelelaniswe ngokutyebileyo kunye nohlaza, okukuvumela ukuba uthathe ikhefu kwiidolophu ezinkulu. Indawo entle yokusebenza kunye nokuphumla. Indawo yepropathi ivaliwe kwaye ibiyelwe. Iindwendwe zisebenzisa indlu enendawo eyi-42m2. Iquka amagumbi amabini kunye negadi, indlu ibandakanya indawo yokupaka.
Kukho ivenkile yegrosari ekufutshane, ipaki entle ehlaziyiweyo ekumema ukuba uhambe, ukubaleka kunye nokukhwela ibhayisekile. Ndiyakumemela kwidolophu yaseSzczodre, ndinikezela ngendawo yokuhlala kwiimeko ezitofotofo.
Kufuphi kukho indawo yokumisa umgaqo webhasi yesixeko u-904, oya kumbindi weWrocław, indawo yokuma yokugqibela eGaleria Dominikańska.
Umbuki zindwendwe ngu- Elżbieta